SHALAY Xulkiisa oo ciyaaraya ayuu ka dhaqaajiyay, CAAWANA….(Aqriso SHEEKADAN ku aadan Eden Hazard) – Gool FM
SHALAY Xulkiisa oo ciyaaraya ayuu ka dhaqaajiyay, CAAWANA….(Aqriso SHEEKADAN ku aadan Eden Hazard)
Byare July 10, 2018
(Russia) 10 Luulyo 2018. Eden Hazard Caawa waa Kabtanka xulka Belgium wuxuuna ku hogaamin karaa Final ka Koobka adduunka haddii ay ka adkaadaan Faransiiska, balse ma ogtahay in waayihiisa ciyaareed ee xulka ayba soo afjarmi gaartay intii aysanba bilaaban.
Sanadii 2011 Eden Hazard wuxuu ahaa xirfadle qaadaya talaabadiisii ugu horreysay xulka Belgium iyo kooxda Lille, balse fal celin uu sameeyay mar la badelay ayaa soo afjari gaartay waayihiisa quruxda badan inta aysanba bilaaban.
Xiddiga Chelsea ayaa qeyb ka ahaa xulkii Belgium ee isreeb reebka European Championship la ciyaarayay Turkiga bishii June ee 2011, tababare Georges Leekens ayaa go,aansadayn inuu badelo Hazard daqiiqadii 60-aad.
Laacibkii hore ee Lille ayaa furka tuurtay isagoo ka xun badelka si huleel ah ayuuna garoonka uga baxay isagoo xitaa diiday inuu salaamo tababarihiisa.
Cid joojisay malahan oo keydka xitaa wuu gudbay toos ayuuna uga baxay garoonka gabi ahaan xilli ay ciyaartu socotay.
Wax yar kaddib waxaa la soo sawiray isagoo Hamburger ka cunaya Maqaaxi caan ah oo ku taala Brussels waxaana la jiray qoyskiisa.
SaxaafaddaBelgium ayaa fadeexad wayn u arkay midaa, tababare Leekens ayaana markii dambe Hazard ku riday Ganaax labo kulan ah.
Belgium ayaa intaa kaddib ka hartay Euro 2012 waxayna horay uga hartay koobkii adduunka ee 2010, waqti fiican uma ahayn xulka.
Laakiin Hazard ayaa iminka qoraya taariikh ka duwan midaas, oo xulkiisa ayuu soo gaarsiiyay afar dhammaadka Koobka Adduunka, waxaana suuro gal ah inay Final ka gaaraan haddii ay caawa ka badiyaan Faransiiska.
Tartanka kubadda kolayga wiilasha iyo gabdhaha degmooyinka gobolka Banaadir oo gaba gaba soo gaaray
Kadib Neymar, PSG oo ka dhigaysa Philippe Coutinho xiddiga ugu qaalisan adduunka!